>Last Sun Day, Heavy Wind stormed Rangoon’s Outskirts | MoeMaKa Burmese News & Media
အညတရ ● ပြည်သူတွေ တရားမျှတမှုကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရှာဖွေရတော့မလား
ဆလိုင်းနံရံ - မိုးတွေပြိုတဲ့ လမ်း
မောင်မောင်စိုး ● ကွန်မြူနစ် FC
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် - ထင်ရင် လွဲခဲတယ်
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ အေးဆေးပါ ...
ကာတွန်း စည်သူကျော်ရဲ့ ဒီတခုပဲ မတက်ပါ ...
လွမ်းဒေါင်၊ ဝုမ်လျံစန်း (Myanmar Now) ● ဘန်ကောက်၊ဂျာကာတာနဲ့ စမ်းချောင်း ဘယ်မြို့က ရေအောက်အရင်ရောက်မလဲ
ဝင်းနန္ဒာ (Myanmar Now) ● မွတ်စလင် လင်မယားကွာရှင်းခြင်းဓလေ့ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေ
အောင်ဝေး - ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၁ ၆ )
ဦးဝင်းတင် (၁၉၃ဝ - ၂၀၁၄)
ထူးထူး (တောင်ငူ) – တော်တော်လေး လိုသေးတယ်
>Interview of DVB video journalist Sithu Zeya
>BBC and SPDC guys
ဒီပဲယင်းတွင် ဒုက္ခိတဖြစ်သွားသည်အထိ ရိုက်နှက်ခံရသူ NLD အဖွဲ့ဝင် ကိုမြတ်ကို
>Kan Tun Thit - Article
>Images in Rangoon Division 3
Maung Luu Way - လေဘာရုံး ဘာလဲ နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဘယ်လဲ?
Zeya Thiri Kyaung - Buddhist Festival
ဇင်လင်း - သမိုင်းအသစ် ရေးကြစို့
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း ဇွန်လထုတ် အသစ် ဝန်ဇင်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
ကာတွန်း သွန်းခ - ကြံ့ဖွတ်တွေ သောက်သင့်တဲ့ဆေး 'တားဆေး'
Join 88,613 other subscribers
မိုးမခ လမ်းညွှန်မှာ သင့်လုပ်ငန်း ပါသလား
Tin's House of Thai Food & Sushi - တင်၏ ထိုင်းနဲ့ ဆူရှီ စားသောက်ဆိုင်
Cho Cho Htet - IRS Tax Return Preparer
ဆောင်းဖြူ ရဲ့ "ရန်ကုန်ဟာ မလုံခြုံတော့ဘူး" စာအုပ်သစ်
စိုးလွင် (၂၁၁) (ဝမ်ခ) ရဲ့ “ဝမ်ခ (ဟောင်း) တိုက်ပွဲ နှင့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဘဝလမ်းများ”
Steamed Burmese Pea - မောင်မောင်သိန်းရဲ့ အလွမ်းပြေပဲပြုတ်
El Cerrito Dental Care - Raymond Yu, DDS
Kyain Kyain - ကြိန်ကြိန် ကြေးအိုး ဆိုင်
Myanmar Journalism Institute - မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ
Dr San San Myint, MD - ဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့် ဆေးခန်း
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month September 2018 (136) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
About MoeMaKa (94)
Business Directory (37)
MoeMaKa VDO (55)
Radio Program (93)
ခရီးသွား ဆောင်းပါး (83)
Maung Swan Yi (54)
U Win Tin (119)
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (181)
SaLai Shwe Lin (7)
Tu Maung Nyo (40)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (156)
Hay Man Thazin (14)
Khaing Aung Kyaw (7)
Ko Myoe (14)
Law Eh Soe (32)
Maung Kyay Yay (8)
Maung Yit (36)
Pwint Phyu Nandar (2)
Saw Ngo (91)
ခုိုင်အောင်ကျော် (နယူးယောက်) (11)
အရှင်ဇ၀န (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) (59)
Ku Mo Jo (68)
Paris Maung (6)
Han Thit Naing (155)
Junior WIn (27)
K ငြိမ်းချမ်း (113)
Ni July (29)
Ni Ni Mar (7)
Suu L Linn (24)
Yan Lin Aung (9)
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (345)
ကာတွန်း – အောင်မော် (121)
ကာတွန်း ၀င်းအောင် (39)
ကာတွန်း ATH (221)
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း (63)
ချမ်းမြ (မုိုးမခအထောက်တော်) (51)
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) (43)
သီဟ (စခန်းသစ်) (51)
ကျော်သူ နဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (320)
ဌေးအောင် (မိုးမခ) (31)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) (79)
နေဝန်းနီ (မန္တ​လေး (2)
​နေဝန်းနီ (မန္တ​လေး) (5)
Nyein Chan Aye (21)
International News (66)
News Features (86)
Photo Essays (29)
Letter to MoeMaKa (24)
Overseas Burmese (14)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (269)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (228)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (1,068)
2013 in Review (9)
2013 Transit (15)
Suu 67 စုစည်းမှု (10)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (411)
Min Min Latt (10)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (203)
Cartoon Box (3,607)
>Last Sun Day, Heavy Wind stormed Rangoon’s Outskirts
၂၅ ရက် နံနက် ၁ နာရီတွင် ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံးအရပ်တွင် လေပြင်းကျခဲ့
ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၀
ယမန်နေ့က လက်ခံရရှိခဲ့သော သတင်းများအရ ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်၊ လှိုင်၊ အင်းစိန် မြို့နယ်များတွင် လွန်ခဲ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၁ နာရီ ကျော်တွင် ပြင်းထန်သော လေပြင်းများ တိုက်ခတ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ သက်ဆိုင်ရာမိုးလေ၀သဌာနများက ကြိုတင်သတိပေးထားခြင်းများ မရှိသည့်အပြင် ညသန်းကောင်ယံအချိန်တွင် မိုးများရွာသွန်းခြင်းမရှိဘဲ လေပြင်းများ ကျယ်လောင်စွာ တိုက်ခတ်ခဲ့သဖြင့် လူအများ ထိတ်လန့်ခဲ့ကြသည် ဆိုသည်။ အချို့က ဆူညံသော လေပြင်းမုန်တိုင်းသံကြောင့် ဒုတိယနာဂစ်ဝင်ပြီဟု ထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်ဟု ပြောဆိုသည်။
လှိုင်မြို့နယ်၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း အိမ်ယာတန်းလျားများနှင့် စားသောက်ဆိုင်တန်းအချို့တွင် အိမ်မိုးများ လွင့်စင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မ ၀င်းထဲရှိ သစ်ပင်ကြီးအချို့ လဲကြောင်း၊ တောင်ဥက္ကလာနှင့် ရန်ကင်းမြို့နယ်များတွင် သိပ်မဆိုးကြောင်း၊ မိုးများပါ ရွာကြောင်း မျက်မြင်တို့က မိုးမခသို့ စာရေးသား သတင်းပို့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
စာဖတ်သူတဦးက ရေးသားရာတွင် –
“သမိုင်း၊ အုတ်ကျင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်ဖက်တွေမှာ ညကြီးမင်းကြီး လေပြင်းတွေ ကျတယ်။ ကောင်းကင်က နီနေတယ်။ နိုးနေတဲ့ လူတွေကတော့ နာဂစ်ဝင်ပြီလို့ ထင်ကြတယ်။ အိမ်ဝရန်တာမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ခေါင်းလောင်းတွေက တလျောက်လုံး မြည်နေတော့ စိတ်ထဲမှာ ကြောက်မိတယ်။ လမ်းမီးကြိုးတွေကလည်း အချင်းချင်းပွတ်ပြီးတော့ မီးတွေ ပွင့်နေတာ မြင်ရတယ်၊ တော်တော်ပြင်းတဲ့ လေပြင်း။ မိုးမရွာတော့ လေချည်းပဲ တိုက်နေတာ နာရီဝက်၊ လေးဆယ့်ငါး မိနစ်တော့ ကြာမယ် ထင်တယ်”
အစိုးရသတင်းဌာနများက ဘာမှ ကြိုတင်သတိပေးမထားသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်က လူအများ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ကြရပြီး နောက်တနေ့တွင် အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်ကြရာတွင် ညက မုန်တိုင်းဝင်သွားတယ်နဲ့ တူတယ်နော်ဟု အလွတ်ပြောဆိုမှုများဖြင့်သာ ထိုကိစ္စက ပြီးသွားသည်ဟု မှတ်ချက်ပေးသည်။
“မြန်မာပြည်မှာက စာနယ်ဇင်းတွေက သတင်းမလုပ်ပေးရင် သတင်းမဖြစ်တော့၊ ဒီလိုမျိုး ကိစ္စတွေက ဒီလိုပဲ ပြီးကြရတာပဲ။ ပြည်ပက ရေးပြန်တော့လည်း သံသယရှိကြပြန်ရော။ ” ဟု သတင်းရေးပေးသူ ရန်ကုန်မြို့ခံ သတင်းထောက်က မှတ်ချက်ရေးထားသည်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Uncategorized
Burmese Community Services (နယူးယောက်၊ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့)
ပညာရေး အထောက်အကူပြု - ဂန္ထ၀င်သစ်စာပေ
Mandalar Charm Travels & Tours Co.,Ltd. မန္တလာချမ်း ခရီးသွားအေဂျင်စီ
Bago - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (1)
Education - ပညာရေးဆိုင်ရာ (1)
Central USA - အမေရိကန်အလယ်ပိုင်း (1)
Restaurants - စားသောက်ဆိုင်များ (1)
Civil Society Groups - အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ (4)
Educational - ပညာရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ (6)
Mandalay - မန္တလေးလမ်းးညွှန် (3)
Market Place - ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် (6)
MoeMaKa Network - မိုးမခနဲ့ မိတ်ဆွေများ (36)
Media Group - မီဒီယာလုပ်ငန်းများ (7)
Online Shop @ MoeMaKa (17)
Publishing House - စာအုပ်တိုက်များ (7)
Religious Center - ဘာသာရေးဆိုင်ရာ (6)
San Francisco Bay Area - ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ (17)
Health Care - ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ (4)
Restaurants - စားသောက်ဆိုင်များ (9)
Services - ၀န်ဆောင်မှုများ (3)
Tour & Travel - ခရီးသွား (8)
မေတ္တာကွန်ရက်အဖွဲ့ မှ လူရည်ချွန်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ ဆယ်သိန်းကျပ် လှူ https://t.co/EcvWq3HMRl https://t.co/9W5vWEDVEe about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
နယူးယောက်ခ်မြို့၊ မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ – မင်းကိုနိုင်၊ ကာတွန်းအော်ပီကျယ် https://t.co/IN9wYNLKXQ https://t.co/8HCGGZGIEy about5hours ago ReplyRetweetFavorite
နေရာတကာ ဂျာနယ် အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ https://t.co/qbnI71sbKJ https://t.co/UB7sNe2gCn about5hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇင်လင်း ● မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလ https://t.co/2D2ygexcSz https://t.co/83p02kynsO about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
လွမ်းဒေါင်၊ ဝုမ်လျံစန်း (Myanmar Now) ● ဘန်ကောက်၊ဂျာကာတာနဲ့ စမ်းချောင်း ဘယ်မြို့က ရေအောက်အရင်ရောက်မလဲ… https://t.co/77kryd3aid about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
Copyright © 2018 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
Graphic Design Course - ကွန်ပျူတာ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း အတတ်သင် လက်တွေ့ သင်တန်း
Dr SAW MRA AUNG FOUNDATION
Gmail and Google Application အသုံးချလမ်းညွှန်စာအုပ်
ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်၏ သတင်းစာလောက ထွက်ပါပြီ
ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်၏ သတင်းစာလောက ထွက်ပါပြီ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်...
ဂီတအနုပညာရှင်ကြီး မာမာအေး စိန်ရတုမွေးနေ့ အမှတ်တရ မိုးမခစာအုပ်ထုတ်
ဂီတအနုပညာရှင်ကြီး မာမာအေး စိန်ရတုမွေးနေ့ အမှတ်တရ မိုးမခစာအုပ်ထုတ် (မိုးမခစာအုပ်စင်) သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၈...
မိုးမခ သြဂုတ်လ ၂၀၁၈၊ တွဲ ၅ မှတ် ၄ ထွက်ပြီ
မိုးမခ သြဂုတ်လ ၂၀၁၈၊ တွဲ ၅ မှတ် ၄ ထွက်ပြီ (မိုးမခ)...
မိုးမခ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ – အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၃ တကယ်ထွက်ပြီ
မိုးမခ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ – အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၃ တကယ်ထွက်ပြီ...
Ko Zaw Zaw Han Win on ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ၀တ္ထုမဖတ်သည့် ပညာတတ်
ညိုထက်ညို on မောင်လူပေ – အမှတ်တရ ဦးတင်ထွဋ်
Dr. Maung Maung Gyi on ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) – ဂိတ်စောင့်ခြင်း
su mon on မျိူးမွန်သွင် – ဆုမွန်ချွေပါသူငယ်ချင်း
Aye Aye Soe Win on ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● အရှေ့တောင်အာရှ အင်ပါယာ